तपाइँको आईफोन वा आईप्याडमा सजिलैसँग ठाउँ खाली कसरी गर्ने आईफोन समाचार
तपाइँको आईफोन वा आईप्याडमा सजिलैसँग खाली ठाउँ कसरी पाउने
यी १GB जीबी उपकरणहरूको लागि राम्रो समय होइन जुन एप्पलले हामीलाई बेच्न जारी राख्दछ: अनुप्रयोग जसले अधिक र अधिक ठाउँ लिन्छ, उच्च परिभाषा चलचित्रहरू, K के भिडियोहरू ... सबै भन्दा ठूला क्षमता उपकरणहरू पनि कहिलेकाँही पूर्ण ठाउँको साथ देखा पर्दछ। हाम्रो उपकरणमा भण्डारण गरिएको धेरै जसो डाटा "जंक" हो जुन प्रणालीले स्वचालित रूपमा मेटाउँदा मेटाउँछ, तर कहिलेकाँही हामी आफैं आफै सफा गर्न सक्षम हुन चाहन्छौं। हामी यसलाई वर्णन गर्न गइरहेका छौं कसरी यसलाई एक धेरै साधारण चालको साथ गर्ने।
कुनै पनि उपकरणमा, भण्डारण सीमित छ र कहिँ देखा पर्दैन, तर त्यहाँ आवश्यक डाटा छन् जुन मेटाउन सकिदैन, र अरूहरू जुन पूर्ण रूपमा व्यप्न हुन्छन्। प्रणालीको अस्थायी फाइलहरू वा आफैं अनुप्रयोगहरूको आफैंमा बचत गर्न सकिन्छ कि तिनीहरूलाई इन्टरनेटबाट डाउनलोड हुनको लागि प्रतीक्षा नगरीकन अझ द्रुत रूपमा पहुँच गर्न सक्षम हुन, तर जब समय आउँछ तिनीहरू हटाउन सकिन्छ यदि प्रणाली उपयुक्त ठानेमा। IOS मा हामीसँग उपकरण छैन जसले हामीलाई यो म्यानुअली गर्न अनुमति दिन्छ, तर यो प्रणाली आफैंले गर्छ जब यो आवश्यक ठान्छ। तर हामी उनलाई त्यसो गर्न उक्साउन सक्छौं: उहाँलाई बढी सोच्नुपर्दछ कि हामीलाई बढी ठाउँ चाहिन्छ। हामी त्यो कसरी गर्छौं? ठीक छ, डाउनलोड गर्ने जुन हाम्रो उपलब्ध भण्डारण भन्दा बढि छ।
उपलब्ध भण्डारण जान्नको लागि हामी सेटि Settingsहरू> सामान्य> भण्डारण र आईक्लाउड पहुँच गर्नेछौं र त्यहाँ यो संकेत हुनेछ (हाम्रो उदाहरणमा 5,8 जीबी)। यदि हामी बढी ठाउँ खाली गर्न चाहन्छौं भने हामीले कुनै गह्रौं चीज खोज्नुपर्नेछ, र "द गॉडफादर" जस्ता चलचित्र भन्दा राम्रो अरू केही छैन। आकारमा GB जीबी भन्दा बढी। हामी आईट्यून्समा जान्छौं र फिल्म भाडामा लिन्छौं। निश्चय गर्नुहोस् निश्चय गर्नुहोस् किनकी तपाईसँग ठाउँ छैन, डाउनलोड हुने छैन र यसैले भाडा मूल्य लिने छैन। हामी स्क्रिनमा देखेको सन्देश हामी हेर्ने छौं र यसले हामीलाई बताउँछ कि त्यहाँ पर्याप्त ठाउँ छैन त्यसैले यो डाउनलोड गर्न सकिदैन।
यदि हामी अब हाम्रो आईफोन वा आईप्याडको स्प्रिboardबोर्डमा जान्छौं भने हामी केही अनुप्रयोग आइकनहरू छायाँ भएको देख्दछौं, तिनीहरू मुनि "खाली सफा ..." पाठ सहित। केहि सेकेन्ड पछि, यदि हामी फेरि सेटि spaceहरू पहुँच गर्न सक्दछौं उपलब्ध स्थान हेर्नका लागि हामी देख्दछौं कि हामीले भण्डार गरेको "फोहोर" मा निर्भर गर्दै हामीसँग प्रशस्त ठाउँ छ। हाम्रो उदाहरण मा हामी "जादू कला" द्वारा लगभग 5GB स्वतन्त्र गरिएको छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS9» तपाइँको आईफोन वा आईप्याडमा सजिलैसँग खाली ठाउँ कसरी पाउने
रियल रेसि3नयाँ कार थपेर अपडेट गरिएको छ
एप्पल नक्शा मोन्ट्रियलमा सार्वजनिक यातायात जानकारी जोड्नुहोस्